Myanmar Defence Weapons: K-8 Aircrafts
တပ်မတော်လေ ကေ-၈ တိုက်လေယာဉ်များထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ
sai March 6, 2011 at 1:26 AM
I am so impressed that in the near future we are going to built our own aircraft with the help of foreign technology. Even this is notabig deal but this is the start point for our air production.
mg March 7, 2011 at 6:59 AM
စစ်အသုံးပစ္စည်းအားလုံးဟာ ဈေးအင်မတန်ကြီးမားလှတဲ့အတွက် သူများနိုင်ငံကိုပဲ အမြဲအားကိုးဝယ်နေရရင် နိုင်ငံအတွက် သိပ်ပြီး မခံသာလှပါဘူး။လေယာဉ်တစ်စီးတန်ဖိုးဆိုတာ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ ဘီလီယံနဲ့ချီဝယ်ရတာပါ။ပြီးတော့ အမြဲတမ်းနည်းပညာဆိုတာ သစ်လွင်နေတာဖြစ်လို့ ဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့ လေယာဉ်တစ်ခုဟာ နောက်နေ့မှာ အသစ်ပေါ်လာမယ့် လေယာဉ်ကို မယှဉ်နိုင်ရင် ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီး အရင်နှစ်က၀ယ်ထားတဲ့အရာတွေဟာ အလကားဖြစ်ကုန်ရတယ်။
နောက်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံမှ သူတို့ရောင်းမယ့် စစ်အသုံးပစ္စည်းတွေကို ဆရာသားမချန်ပဲ ရောင်းလေ့မရှိပါဘူး။သူတို့နိုင်ငံလောက် စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်း ရာနှုံးပြည့်မရောင်းကြပါဘူး။မကောင်းကျောင်းပို့ဆိုသလို အရည်သွေးနိမ့်တာပဲ ရောင်းကြမှာပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပိုင်နည်းပညာစွမ်းအားနဲ့ကြိုးစားကြမှ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်နိုင်မှ တော်ကာကြမယ်။အမိနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည် တိုးတတ်မြင့်မားအောင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားကြရမှာပါ။
Kyaw March 7, 2011 at 11:26 AM
We will start with jet trainers and when we have enough experience, we will move to develop jet fighters. We are heading to the right direction.